SERVO-720 Automatic Servo Cup Ukwenza Machine - China Guangdong Jinxin Machinery
Uhlobo / Iparameters SERVO-720
Area senziwe (mm) 720 × 450
Ubunzulu senziwe (mm) 180
Speed ​​senziwe (imijikelo / min) 20-35
Ukutyeba (mm) 0.3-2.0
Amandla The Machine siPhela (kW) ≤ 55
Air Usetyenziso (MPA) 0.6-0.8
Usetyenziso Water (m3 / h) ≤ 0.5
Thermoforming nokupakishwa umgqomo ezifana neekomityi, iibhokisi, nezitya. Ezifana indebe ubisi, indebe ijeli, iikomityi cream ice, iikomityi omnye-off, nezitya pasta nangoko, iibhokisi uzila ukutya, njalo njalo.
Umatshini 1.The usebenzisa isakhiwo-umhlathi emine, kunye nokusebenza kakuhle, ingxolo phantsi, anamandla nokubotshwa njalo njalo.
ukuhlanganiswa igesi 2.Mechanical kunye umbane, aphezulu-ngqo servo ukuthumela sheet, servo ukuzolula, PLC ulawulo servo motion, ubushushu umnqongo wolawulo yolawulo loseto ekrelekrele.
3.A degree eliphezulu esizisebenzelayo, isantya imveliso. Esebenzisa ufakelo ngumngundo ezahlukeneyo unako ukuvelisa iimveliso ezahlukeneyo, ukuphumeza injongo multi ukusetyenziswa kumatshini.
4.By usebenzisa amazwe brand-igama izakhi zombane, amacandelo womoya, ukuqinisekisa ukusebenza ezinzileyo, umgangatho oluthembekileyo, ubomi inkonzo ende.
5.The isakhiwo yonke Ngokomzi, uxinzelelo, sukube, ukusika, ukupholisa, imveliso bevuthela kunye neminye imisebenzi emiselwe sokubumba, ukuze inkqubo imveliso mfutshane, ibakala eliphezulu agqitywa, ngokuhambelana nemigangatho yempilo yesizwe.
Umatshini 6.The ngokufanelekileyo ukwenziwa PP, PE, PET, iinyonga, GPPS kunye nezinye iimveliso Iphepha zeplastiki. Ezifana neekomityi, iingqayi, neekomityi kunye nezinye izikhongozeli zibhityile Undibiyele, ezifana neekomityi ubisi, iikomityi ijeli, iikomityi ice cream, iikomityi ukusela ezilahlwayo, nangephanyazo noodles isitya, iibhokisi ukutya njalo njalo.
: Previous HPC -860 Automatic fracturing Cup Ukwenza Machine
Okulandelayo: WJ Series zokubhala Plastic Sheet Extruder